MR MRT: It Hasn't Yet Got Late, Old and Changed - မနှောင်းသေးပါဘူး မဟောင်းသေးပါဘူး မပြောင်းသေးပါဘူး
It Hasn't Yet Got Late, Old and Changed - မနှောင်းသေးပါဘူး မဟောင်းသေးပါဘူး မပြောင်းသေးပါဘူး
ဒေါက်တာအရှင်ဣန္ဒကရဲ့ Dhamma Gardenမှာ ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာ ဘာသာရေးသင်တန်းဆင်း လက်မှတ်တွေဟာ အလုပ်လျှောက်ရာမှာ အသုံးဝင်ပါသတဲ့။ ဒီအကြောင်းကို သီလရှင် ဆရာလေးတစ်ပါး ရေးတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှာလည်း ဖတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အီးမေးလ် ရခဲ့တာပါ။ ရန်ကုန် နိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိသာသနတက္ကသိုလ် နှစ်ပတ်လည်မဂ္ဂဇင်းအတွက် ရေးတာလို့ ပြောတယ်ထင်တာပါပဲ။ သူ့ဆောင်းပါးမှာ အဓိကတင်ပြတာကတော့ သီရိလင်္ကာက တနင်္ဂနွေ ဘာသာရေး သင်တန်းကျောင်းတွေကို အားကျတဲ့အကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ HRမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ မြန်မာဒကာလေး တစ်ယောက်ကို အဲဒီအကြောင်း ပြောပြပြီး သူ့အမြင်ကို မေးကြည့်တော့ “မဆိုင်ပါဘူး”တဲ့။ သူက အလုပ်ခန့်ထားရေးမှာ အတွေ့အကြုံ နဲ့ အတွေးအကြံ ရှိတဲ့သူ။ သူ့အမြင်က ဘာသာရေးဟာ ဘာသာရေး၊ အလုပ်ဟာ အလုပ်တဲ့။ အလုပ်သမား ရွေးခြယ်ရာမှာ ဘာသာရေးသင်တန်းဆင်းလက်မှတ်ကို အလုပ်အရည်အချင်းအတွက် သက်သေခံအဖြစ် အသိအမှတ် မပြုနိုင်ဘူးတဲ့။ ဘာသာရေးစာတွေ တတ်နေလို့ အလုပ်အတွက် ဘာမှအသုံးမကျနိုင်ဘူးတဲ့။
အမြင်ဆိုတာကတော့ မြင်ချင်သလို မြင်နိုင်ကြတာပေါ့။ ဘာသာရေးက အလုပ်နဲ့ မဆိုင်ဘူး အလုပ်ကို အထောက်အကူ မပြုနိုင်ဘူးလို့ မြင်နိုင်သလို ဆိုင်တယ် အထောက်အကူ ပြုနိုင်တယ်လို့လည်း မြင်နိုင်ပါတယ်။ ဆိုပါစို့ ဘာသာရေး သင်တန်းတက်ထားသူ တစ်ယောက်ဟာ ဘာသာရေးအရ သိမ်မွေ့မှု ကောင်းမြတ်မှုတွေ ရှိနေမယ်။ စိတ်ဓာတ်စင်ကြယ်မယ်။ သိမ်မွေ့မယ်။ အလုပ်ရှင်နဲ့ အလုပ်ဖော်နဲ့ ဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်မယ်။ အလုပ်ရှင်ကို အလုပ်ဖော်ကို ချစ်ခင်မယ်။ လေးစားမယ်။ အလုပ်လုပ်ရာမှာ သမာသမတ်ကျမယ်။
နောက်တစ်ခုက အစွန်းထွက် ပြဿနာ။ ဘာသာရေးသင်တန်းဆင်းလက်မှတ် ကိုင်ထားတာနဲ့ ဘာသာရေးအရ သိမ်မွေ့မှု ကောင်းမြတ်မှုတွေ ရှိနိုင်ပါမလား ဆိုတာပါပဲ။ မသေချာပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သာသာရေးသင်တန်းဆင်း လက်မှတ်လည်း တစ်ခြားလက်မှတ်တွေလိုပဲပေါ့။ ကွန်ပျူတာသင်တန်းဆင်းလက်မှတ် ကိုင်ထားတာနဲ့ ကွန်ပျူတာ ကျွမ်းကျင်သူ မဖြစ်နိုင်သလိုပေါ့။ ဘယ်နယ်ပယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် လက်မှတ်စာရွက် ဆိုတာကတော့ အရည်အချင်းရှိတယ်လို့ ယေဘုယျ သတ်မှတ်ပေးတဲ့ အရာသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ ဖတ်မိခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ တွေးဖြစ်လိုက်တဲ့ အတွေးသက်သက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာရေး အသိ ဘာသာရေး အကျင့်ကို လုပ်ငန်းခွင်မှာ နေရာပေးမပေး ဆိုတာကတော့ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းခွင်မှာ မူဝါဒ ချမှတ်သူတွေနဲ့သာ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်သူတွေပဲ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်။ သီရိလင်္ကာမှာလို ဘာသာရေး အသိကို အသိအမှတ်ပြုမယ်ဆိုရင် ဦးဂါးဒင်း [ဒေါက်တာ အရှင်ဣန္ဒကကို ချစ်စနိုးခေါ်တဲ့ နာမည်။ :)] ပြောသလိုပေါ့။ "မနှောင်းသေးပါဘူး။"
ဗုဒ္ဓဘာသာ တရားတော်တွေကို ကျင့်မယ် သုံးမယ်ဆိုရင် တရားတော်တွေဟာ ဒီနေ့ခေတ်မှာလည်း အသုံးဝင်ပါသေးတယ်။ အထူးသဖြင့် နေရာတိုင်းမှာ အသုံးဝင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်စင်ကြယ်မှု သိမ်မွေ့မှုကို တရားတော်တွေက လှုံ့ဆော်ဖန်တီး ပေးနိုင်ပါတယ်။ "မဟောင်းသေးပါဘူး။"
ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံတော်အတွင်း လက်ရှိအခြေအနေကတော့ . . . ဒီလိုပါပဲ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာ သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်တွေကို အလုပ်လျှောက်ရာမှာ သုံးလို့ မရသေးပါဘူး။ [သုံးလို့ရမယ် ဆိုရင်လည်း နိုင်ငံတော်က သင်တန်းဆရာတွေကို လခပေးတဲ့ သီရိလင်္ကာမှာလို သင်တန်းတွေ လုံလုံလောက်လောက် မရှိသေးပါဘူး။] "မပြောင်းသေးပါဘူး။"
Photo from (22 January 2011):
Posted by Ashin Acara. at 11:18 PM
Dr. Ashin Indaka January 22, 2011 at 1:43 AM
သီရိလင်္ကာအစိုးရက ဘာသာရေးအောင်လက်မှတ်ကိုင်ထားသူကို အလုပ်လျှောက်တဲ့နေရာမှာ ဦးစားပေးတာက ဘာသာရေးသင်တန်းကို လေးလေးနက်သင်စေချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်လဲ ပါမယ်ကိုယ့်လူရဲ့။
apymt.com January 22, 2011 at 3:03 AM
သေပြီ ဆရာ..။ :P
Ashin Acara. January 22, 2011 at 4:29 AM
ဟုတ်ပါ့။ လေးလေးနက်နက် သင်စေချင်တဲ့ သဘော၊ ရှုပ်ယှက်ခပ်အောင် အားပေးတဲ့သဘောပေါ့ ကိုယ့်ဆရာရယ်။
Good Friend (Part 2) - မိတ်ဆွေကောင်း (အပိုင်း ၂)
Good Friend (Part 1) - မိတ်ဆွေကောင်း (အပိုင်း ၁)
Dukkhasacca - ဒုက္ခသစ္စာ
Around the Ku Tho Daw Pagoda